TOP quán ngan ngon ở Hà Nội đắt khách nhất hiện nay | Excitinghochiminhcity - Excitinghochiminhcity.Vn
TOP quán ngan ngon ở Hà Nội đắt khách nhất hiện nay | Excitinghochiminhcity
Hanoi inozivikanwa separadhiso yekubika ine zvisingaverengeki zvinonaka ndiro. Pakati pavo, swan dish yakagamuchira kurumbidzwa kwakawanda. Unotoziva chikafu chinonaka chehanzi muHanoi zvakadaro? Pamwe chete Digiticket pocket 10 nzvimbo dzakakurumbira kuti unakirwe nehandi dzinonaka!
1 I. Inonaka Hanoi vermicelli uye vermicelli
1.1 1. Ngan Nhan restaurant – inonaka yekudyira gooseberry muHanoi
1.2 2. Hanh Ngan De – inonaka Hanoi swan vermicelli
1.3 3. Noodle soup Le Dai Hanh
1.4 4. Bun Ngan Ba ​​​​Hang – Hanoi Mangan Noodle Shop
1.5 5. Bun Ngan Dung Beo
1.6 6. Vermicelli Van Chien – Hanoi yakasanganiswa vermicelli
1.7 7. Noodles dzakasungwa zvakasimba nezvinhu
1.8 8. Bun Ngan Ba ​​Thong
1.9 9. Sayenzi
1.10 10. Bun Ngan Thuy
2 II. Inonaka yakagochwa magasi maresitorendi muHanoi
2.1 1. Nyama yehanzi – Huyen Anh
2.2 2. Ngan Ba ​​Nga Restaurant
2.3 3. Tram inonaka
2.4 4. Ngan Pho
I. Inonaka Hanoi vermicelli uye vermicelli
Kana iwe uchida kutsvaga inonaka soup kero muHanoi, unogona kutarisa anotevera maresitorendi.
1. Ngan Nhan restaurant – inonaka yekudyira gooseberry muHanoi
Kero: No. 11 Trung Yen Alley, Hang Bac, Hoan Kiem, Hanoi
Maawa ebhizinesi: 10h30 – 21h30
Reference mutengo: 30,000VND – 70,000VND
Hapana chikonzero chekuongorora zvakanyanya, vermicelli ine mukurumbira muguta rose seresitorendi inonaka muHanoi inodiwa nevakawanda vanodya. Hakusi kunaka kwetsvina kuno kunakidza chete, asi kuti mai Nhan vanozivikanwa semunhu anotuka vaenzi kunge muimbi akanaka. Pasinei ne “hunhu” hwake, vaenzi vachiri kudirana kuti vanakidzwe nehanzi dzake.
Yakavakirwa mumukoto mudiki paHang Bac, vatengi vazhinji vanofanirwa kumira mumutsara kuti vawane nguva yavo yekudya. Iri mumitsetse, asi vanhu vanonyatsoziva kutera. Matafura epurasitiki akareruka uye macheya anogona kugara padivi penzira uye mumba kana kune yakatarisana cafe. Rustic nzvimbo, yechokwadi yeVietnamese yekudyira maitiro.
Mufananidzo: Ngan Nhan – yakanakisa vermicelli muHanoi (Yaunganidzwa)
Ngan Nhan menyu ine Ngan tight, vermicelli uye Ngan ropa. Nyama yenguruve yakasimba, inotapira, uye yakarungwa nemunyu, mhiripiri neremoni. Noodles pano dzakabvaruka, dzikamera geese uye bamboo nhungirwa, ndiro yevermicelli izere nevermicelli uye inotaridzika kunakidza. Muto wacho unotapira, une hunhu hwakashinga kuravira kweswan.
2. Hanh Ngan De – inonaka Hanoi swan vermicelli
Kero: 72 North Gate, Quan Thanh, Ba Dinh
Kufamba kubva ku63 Cua Bac, Hanh Ngan De zvakare ine mukurumbira chitoro chenoodle muHanoi. Vermicelli yakazara, muto wakajeka uye unotapira. Nguva zhinji vaifunga kuti chitoro chakavharwa kutengeswa, kwakazoita shanduko yenzvimbo.
Kunyanya, Hanh dé ane mukurumbira zvakare sechinonaka chakakangwa geese negariki muHanoi, yakarungwa kuravira, yakanyikwa nemuto wesoya.
3. Noodle soup Le Dai Hanh
Kero: 31 Le Dai Hanh Street, Hai Ba Trung
MaNoodles anokura pa31 Le Dai Hanh ichave inotevera inonaka yekuHanoi yekudyira iyo Digiticket inoda kutora iwe kuti unakirwe. Iyi ikero inozivikanwa kune vazhinji vanodya munzvimbo yeHai Ba Trung. Iyo nzvimbo haina kushamisira, senge mamwe akawanda akareruka uye erustic maresitorendi muHanoi.
Goose nyama inonaka, yakapfava, uye inotapira, vaenzi vanogona kuiraira zvakasimba kuti inyatso dya vermicelli. Mapeteti epakati-kati, nyama inonhuhwirira, huturu hwakafanana hwehuni nzeve, kutsenga kunofadza. Chitoro chinotengesawo mazai madiki, muridzi anopa zvakawanda kana iwe ukahodha iyi topping, asi mazai madiki pano haana runny consistency.
Muto we vermicelli ungangodaro “mweya” weiyi ndiro. Muto wacho unotapira nekunakirwa kwemapfupa akasimirirwa uye kuravira kwakasiyana kweswan. Mundiro wakazara wevermicelli pano unosanganisira: nhungirwa dzakaomeswa bamboo, nhungirwa nyowani dzeshenjere, nyama yakamera uye yakatsemurwa. Sour bamboo nhungirwa kune zvidimbu zvakakura, wedzera zvishoma zvinonhuwira, crispy asi zvinonhuhwirira. Iyo yekudyira ine yakawanda vermicelli uye yakasanganiswa ndiro dzevatengi kusarudza kubva.
Mufananidzo: Bun Ngan Le Dai Hanh – Yakaunganidzwa
4. Bun Ngan Ba ​​​​Hang – Hanoi Mangan Noodle Shop
Kero: Kiosk 3, Nghia Tan Ward, Nghia Tan Dormitory, Cau Giay
Reference mutengo: 30,000VND – 230,000VND
Iyo inonyanya kuzivikanwa munharaunda yeCau Giay, chero munhu ari paNgan timu anoziva nezveNgan Ba ​​​​Hang. Inonaka yekudyira kuHanoi haigone kuve isina rudzi urwu nekuti yakasanganiswa swan vermicelli inokonzera “nostalgia” zvakanyanya.
Menyu yaMs. Hang yakagadziridzwa negariki-fired swans, iyo inodhura kuhodha kubva pazuva rekutanga rekutengesa. Musanganiswa wevermicelli uchiri nekuravira kumwechete sepayaitengeswa, izere nekunhuhwirira, zvinonhuwira uye muto unotapira, wakasanganiswa nenyama yakasimba yeswan, basil, nzungu dzakakangwa uye hanyanisi dzakakangwa zvinonhuhwirira. Yese mbiya izere nekunaka crispy geese uye yakavava bamboo nhungirwa topping.
Iyo swan yakakangwa pano inoshamisa kwazvo, kusiyana nemamwe zvitoro zve swan, mushure mekupisa zvakadzika, mubiki anoimutsa nemuto wakapfuma, unotapira unongowanikwa paresitorendi. Usakanganwa kuodha yakawanda inopisa bamboo kupfura soup, muto mune imwechete inonhuhwirira green hanyanisi. Zvisinei, mamiriro okunze haana kunaka. Chitoro chiripo paZvino, Grab uye Baemin kune vatengi vanoda kutumira.
5. Bun Ngan Dung Beo
Kero: Mukoto 20 Hang Voi, Hoan Kiem District
Reference mutengo: 30,000VND – 200,000VND
Rondedzero yemaresitorendi anonaka muHanoi haigone kukwana pasina zita reBun Ngan Dung Beo. Sechitoro chiri nyore cheparutivi, chakachena uye chakatsvinda, muridzi wacho anofara, ari nyore uye ane shungu kwazvo.
Ndiro yevermicelli noodles izere nenyama, yakachekwa zvine mwero gobvu, nhungirwa dze bamboo dzakachekwa zvitete uye dzinoperekedzwa neropa rakatsetseka uye rakatsetseka. Muto wacho unonhuwirira, wakajeka, hauna tsvina, uye unotapira. Usakanganwa kuodha imwe yakakosha inotapira uye muto wakavava. Iresitorendi yakazara zvakanyanya manheru, saka unofanirwa kuronga kuenda nekukurumidza kudzivirira kumirira kwenguva refu uye kupera kwezvigaro.
6. Vermicelli Van Chien – Hanoi yakasanganiswa vermicelli
Kero: 326 Ba Trieu, Hai Ba Trung District
Reference mutengo: 30,000VND – 300,000VND
Iri pedyo pedyo neVincome Ba Trieu nharaunda, Van Chien vermicelli ichave imwe inonaka yekudyira nyama yehanzi muHanoi kuti iwe uwane. Wese munhu anoziva kuti Van Chien ane inotapira uye inovava noodle dish. Nzvimbo yacho yakati chechetere nekuti iresitorendi yepadivi penzira asi pakazara nevatengi vasinganzwisisike. The hostess aifara, ane chido uye akanyatsoteerera.
Iyo inonyanya kufarirwa ndiro pane menyu ichiri kutapira uye yakavava yakasanganiswa vermicelli. Nyama yakatetepa yakachekwa nechiropa, gizzard, itsvo, nzungu dzakakangwa, nhuhwirira dze bamboo uye ropa. Muto unotapira uye unovava wakapfuma, unonaka kwazvo, uchiwedzera muto wesoya kunhuhwirira uye kudya nebasil kwakanaka.
Kune zvakare inopisa soup yenoodle uye goan chop, kutsenga muto wekudhibha nemuto wakasarudzika, haugone kukanganisa. Zvisinei, chitoro chacho chinopisa zvishoma kana akagara pazuva rezhizha.
7. Noodles dzakasungwa zvakasimba nezvinhu
Kero: 16 Hang Can, Hang Bo, Hoan Kiem
Hazvina kunyanyo kuoma kuwana kero yekudyira inonakidza swan muHanoi, chitoro chega chega chichava nechayo chakasiyana maficha uye zvinonaka zvakasiyana. Zvinofanira kutaurwa kuti vermicelli muHang Can inopfuudzwa nevazhinji vanodya. Paunongotsika muchitoro, unenge uchiyemura mufananidzo wemuridzi wechitoro akabatikana uye akabatikana kugadzira chikafu chekupa vatengi. Iresitorendi haina kunyanyokura, asi yakazara nevatengi.
Goose nyama inonhuhwirira, yakasimba, inotapira uye isina kuoma. Muto we chan vermicelli unonyatso kunyungudutswa kubva pamapfupa nemutsipa we swan, saka inotapira. Iyo inoperekedzwa nendiro yedivi rinonyanya kukosha kune bamboo nhungirwa, iyo yakamutswa-yakakangwa, saka yakapfuma uye yakasanganiswa. Ngan inokosha kune basil uye pamusoro pehanyanisi inonhuhwirira. Iyo mbiya yese yevermicelli ine goose nyama, bamboo nhungirwa, yakatsetseka ropa, inonaka kufenda.
Mufananidzo: Bun Ngan Hang Can – inonaka chitoro chenoodle muHanoi (Yaunganidzwa)
8. Bun Ngan Ba ​​Thong
Kero: 56 Bat Su, Hoan Kiem
Iri munzvimbo yedhorobha rekare, pamharadzano yeHang Phen – Bat Su, yakatarisana neVietcombank, iwe unowana Ngan Ba ​​​​Thong restaurant. Menyu huru yeresitorendi ndeye vermicelli, vermicelli, uye bamboo nhungirwa. Hapana chikonzero chekupisa gariki, mamwe madhishi matatu akakwana “kupwanya” moyo wako wekubika.
Nyama yehanzi inobikwa zvekusvika pakupfava, yakasimba, uye inonaka. Kunyura nemvura inotapira uye inovava haisi kufinha. Iyo bamboo shoot soup yakanaka kwazvo, ropa rakatsetseka, harina kuoma kana furo, mashizha emushenjere ari crispy uye anonhuhwirira. Nekudaro, nzvimbo yeresitorendi haina kupamhama, saka panguva dzepamusoro, matafura anokurumidza kutengeswa kunze.
Kero: 77 Hai Ba Trung, Cua Nam, Hoan Kiem
Imwe yakakurumbira yekudyira yeHanoi geese ndeye Khoa Ngan Xua naNay. Khoa Ngan brand yave iripo kweanopfuura makore makumi matatu ine yakakosha uye yakasarudzika swan process recipe. Inonaka nyama yenguruve, inonakidzwa ne9 zvinonhuwira uye 5 miriwo inovaka muviri haingakuregi iwe.
Nendiro dzinopfuura makumi matatu nembiri kubva kunyama yenguruve, asi iyo inonyanya kuzivikanwa ichiri vermicelli, yakasanganiswa vermicelli uye yakagochwa geese, gariki kana gwizi geese. Inonaka, nyama inopisa kana ichipihwa vatengi. Ravirai uye musanganise zvakanyanya kana madyiwa nemuto wechinyakare.
Iine nzvimbo ine rustic, yakadzika uye yakafara, Khoa Ngan inogara yakazara vanhu nekuda kwezvigaro zvayo zvine hunhu uye zvine air-conditioned. Chitoro chine 3 pasi, chinogona kugarisa vashanyi vanosvika mazana maviri, rima remukati rematanda asi rakasarudzika uye rinogara.
10. Bun Ngan Thuy
Kero: 14 & 51 Hang Luoc, Hang Ma, Hoan Kiem
Iko hakuna kushanda kwenguva refu sezvitoro zvataurwa pamusoro apa, asi Ngan Thuy zvakare iresitorendi yeVietnamese inonaka muHanoi yausingafanire kufuratira. Kwete kungomira pane zvakabikwa swan ndiro, chitoro ndiyo nzvimbo yekutanga kuunza akakosha akapiswa negariki. Kuuya pano, iwe uchafanirwa “kuyemura” nekuti huwandu hwevaenzi hwakanyanya.
Chokwadi unotoziva kuti “best seller” weresitorendi chii. Yakapisa garlic inonhuhwirira, kunze, yakapfava mukati, nyama inotapira, kunhuwa kwegariki yakatsva, inonyengera. Mukuwedzera kune swan yakakangwa negariki, vermicelli uye vermicelli nemvura yemvura inorumbidzwawo nevakawanda vanodya.
II. Inonaka yakagochwa magasi maresitorendi muHanoi
1. Nyama yehanzi – Huyen Anh
Kero: Nhamba 37 ne39B Nguyen Du, Bui Thi Xuan wadhi, Hai Ba Trung dunhu, Hanoi
Maawa ebhizinesi: 07:00 – 22:00
Reference mutengo: 20,000 VND – 55,000 VND
Avo vako vari munharaunda yeNguyen Du mugwagwa zvechokwadi havagone kufuratira inonaka yakagochwa ganzi resitorendi Huyen Anh. Iyo resitorendi ine dhishi yakazara, asi vazhinji vevatengi vanouya vanowanzoodha inopisa, yakazara pani. Iyo gasi yakagochwa yakarungwa nekunhuhwirira kwakasimba negariki, kunyanya hanyanisi, kuvhara kunhuhwirira kwedhadha. Chidimbu chenyama yegolden swan chinongodyiwa, chinonhuhwirira zvakanyanya, chinopisa kana chadyiwa ne bamboo nhungirwa vermicelli chinodiridza mukanwa.
Soso iri pano inoyevedza, yakarungwa nezvinonhuwira uye inonhuwirira garlic soso, kunhonga chiswani chegoridhe chakagochwa nendiro yemushonga wakasarudzika weHuyen Anh resitorendi ichaita kuti urangarire zvachose.
2. Ngan Ba ​​Nga Restaurant
Kero: 8 Hoang Ngoc Phach, Lang Ha, Dong Da, Hanoi
Maawa ebhizinesi: 09:00 – 21:00
Reference mutengo: 30,000 VND – 60,000 VND
Iresitorendi ine menyu yakasiyana-siyana kubva kuvermicelli, pan swan, yakabikwa swan, yakakangwa swan kusvika kune yakakangwa swan, iyo yakakodzera chaizvo kudya kwemasikati uye kudya kwemanheru uye vanhu vanonwa. Chitoro chinongova ne1 floor, saka chinogara chakazara masikati nehusiku.
Iyo swan yakagochwa pano inonaka, yakabikwa zvakaenzana, nyama yehanzi haina mafuta asi yakasimba uye inonhuhwirira, zvimedu zvegezi zvakakura zvekukwana mumuromo, kunyanya pani inovhimwa nechitsuwa, saka inotorwa uye kwete. neta.
3. Tram inonaka
Kero: 42 Hang Non, Hang Gai, Hoan Kiem, Hanoi
Maawa ebhizinesi: 10:00 – 23:00
Reference mutengo: 35,000 VND – 120,000 VND
Chitoro chine nzvimbo yakakura, kusanganisira 2 pasi, vanodya mapurasitiki ari nyore kufamba uye kuronga. Iwe unogona kusarudza zvese mukati uye kunze nzvimbo dzekutonhorera. Chikafu chikuru cheresitorendi ndiyo yakasarudzika yakapiswa geese negariki kukunda vatengi vese vanonyanya kuda
Zvimedu zvegoriki zvakadzika-zvakakangwa asi zvichiri kuchengetedza kunhuhwirira, zvimedu zvemutton zvinongodiridza mukanwa, zvine mafuta, uye kunhuhwirira kunosanganiswa nezvinonhuhwira zvakapfuma kana zvadyiwa nebasil, Chinese coriander, zvakatonyanya kuzara nekunaka.
4. Ngan Pho
Kero: 60 Duy Tan, Dunhu reCau Giay, Hanoi
Reference mutengo: 70,000 VND – 400,000 VND
Maawa ebhizinesi: 07:00 – 21:00
Yakatangwa muna 2016 kusvika zvino, Duy Tan’s gumi ndiro Ngan mugwagwa yave inojairwa kuungana kwevanhu vazhinji. Chitoro chine yakanaka, yakasarudzika, nzvimbo yakachena, yekupaka pamberi pemusuwo iri nyore kwazvo.
Ngan Pho ine akasiyana mamenu akadai seakabikwa, akagochwa, akakangwa swan, vermicelli, mannequin, spring rolls, uye spring rolls nemitengo inonzwisisika. Zvisinei, inonyanya kufarirwa ndiro 7 dzehanzi, dzakagochwa nemunyu, uye dzakagochwa nezvinonaka zvakasiyana. Chidimbu chega chega che swan chinochekwa zvakanaka, chakabikwa nezvinonhuwira, uye ndiro ye swan yakazara, ichikunda vese vanonyanya kuda vatengi.
Vhara top list chikafu chinonaka chehanzi muHanoi zvakanyatsotsanangurwa nevanhu veko. Ndinovimba, kuburikidza nechinyorwa ichi, iwe uchave nereferensi iri nani yekugadzwa kuri kuuya.
Kana iwe uchida kushandura kuravira kwako, unogona kutendeukira kune anokwezva mazano pazasi:
READ Top 11 Hồ Nước Tự Nhiên Lớn Nhất Việt Nam Khiến Bạn Sửng Sốt | Excitinghochiminhcity
← 8 quán kem ngon Sài Gòn rẻ giúp bạn “tan biến” cơn nóng mùa hè | Excitinghochiminhcity
Mê Mẩn Top 10 địa điểm Bán Sen đá Tại Đà Nẵng đẹp Ngất Ngây | Excitinghochiminhcity →